नमिलेका ब्रा लगाउँदै हुनुहुन्छ ? होसियार ! « Himal Post | Online News Revolution
नमिलेका ब्रा लगाउँदै हुनुहुन्छ ? होसियार !
प्रकाशित मिति : २०७३, ८ कार्तिक ०८:०७
काठमाडौं । अधिकांश महिलाले विचार नै नपु¥याईकन ब्रा किन्ने गर्छन् । ब्राकै कारण शरीरमा असहज भयो भनेर पनि त्यति चासो देखाउँदैनन् वा औषधिउपचार गर्र्र्दैनन् । बरु पीडा सहन्छन् । विज्ञहरुका अनुसार फिटिङ नमिलेको ब्राले महिलाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको हुन्छ । आफूलाई फिट नहुने ब्रा लगाउँदाका बेफाइदा
यदि तपाईको काँधमा नीलो डाम वा छाला कोतरिएको छ भने निश्चय नै तपार्इंले आफूलाई नमिल्ने ब्रा लगाउनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा तपार्इंमा संक्रमण इन्फेक्सनको खतरा हुन्छ ।
नमिलेको वा बढी कसिलो ब्राले छाती वरपरको भागमा डाम बसाल्नुका साथै श्वास फेर्नसमेत कठिनाइ हुन्छ । कहिलेकाहीँ पाखुरामा पिनले घोचेजस्तो सेदना त महसुस गर्नुभएको छैन रु यदि हो भने यो सबै फिट नभएको ब्राको परिणाम हो ।
नमिलेको ब्रा लगाउँदा छातीका दुई ठूला मांसपेशीमा हुने दबाबले रक्तप्रवाहमा समस्या ल्याउँछ । स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले छापेको छ ।
ब्राले कहिलेकाहीँ तपाईंको शरीरको अवस्था र स्वरुपमा पनि प्रभाव पार्छ । नमिलेको ब्रा लगाउँदा तपाईंको कुम कुप्रो परी शरीरको आकृति नै बिग्रेको देखाउँछ ।
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर कतिपय अवस्थामा तपार्इंले लगाएको असन्तुलित ब्राले पेटमा गडबडी हुनुका साथै बारम्बार पेट दुख्ने र पखालासमेत लाग्छ ।